/Blog/garari/Orlistat Inoshanda Sei Seweya Wekurasikirwa Zvinodhaka?
Posted on 03 / 02 / 2020 by 阿斯劳 akanyora garari.
Sekureva kwedata kubva kuWorld Population Ongororo, United States inove gumi nemaviri pasi rose nekuda kwekufutisa muhuwandu hwayo. Center for Disease Control (CDC) inofungidzira kuti zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu vakuru vekuAmerica vane makore makumi maviri ekuzvarwa vanopera, zvichienderana ne data rakaunganidzwa muna 12.
Nhamba dzezviratidziro dzinoratidza kuti vakadzi makumi matanhatu neshanu muzana, uye makumi matatu nemasere muzana, kana makumi matatu nemakumi matatu emamiriyoni eAmerica, vari kurwa nehupfumi. Huverengero hwazvino hunoratidza kuwedzera kwakapusa kwehuwandu hweAmerica pamakore makumi matatu apfuura.
Nehurombo, iyo data haina kutaridzika zviri nani kune vechidiki veAmerica, chero. Dzakakomberedza 15% yevese vachiri kuyaruka nevana vane huremu hwakanyanya kana kufutisa, inova katatu zvakapetwa zvichienzaniswa nema1980.
Maererano nedatha kubva kuThe State of Obesity, yazvino dhata kubva kuBehavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), inoratidza nyika pfumbamwe ine huwandu hwekufutisa kweanopfuura makumi matatu nemashanu muzana. Kansas, Florida, New Mexico, Utah, Missouri, Minnesota, uye New York vese vakaona huwandu hwekufutisa huchikwira muvanhu vakuru nevana pakati pa 35 na 2017. (2018)
Saka, nei America iri kubata nedenda rekufutisa kuri kubata vakuru nevana munyika yese? Kufutisa kune hukama hwakasimba kune yakasarudzika mararamiro sarudzo uye maitiro ezvekudya. Vana vanotamba zvekunze zvakaderera kupfuura zvavakaita muma1980s, nekufambira mberi kwehunyanzvi mukugadzira mitambo yemavhidhiyo uye dzimwe nzira dzevaraidzo dzinochengeta vana vachiri pasi.
Vakuru vane varaidzo uye zvekutakura zvekutakura masevhisi zvinowanikwa zviri nyore nguva dzese nguva. Zvese zvakaringana zviripo muhupenyu hwedu zvinowedzera pamusoro pekushandiswa kwakanyanya kwemakorori, uye kusakwana kurovedza muviri kupisa simba rekuwedzera.
Kudya macalorie akawandisa ezvaunoda simba zvinotungamira kumuviri, kuchengetedza simba rekuwedzera semafuta. Mararamiro akasarudzika sarudzo, chikafu chine macalorie chakakora mu makabhohaidhiretsi nemafuta akashata, uye zvishoma zvekusakwikwidza, nzira yekufutisa - Zvese zvinotora inguva.
MUTSVENE ndiye mutengesi weanoshanda uremu hupfu-Orlistat poda.
Ndokumbirawo ubaye pano kuti uwane ruzivo rwemutengo. Cont Cont us
Kufutisa kunogumira hunhu hwemunhu akabatwa. Nekudaro, nepo vazhinji vekuAmerican vachiziva kuti kuwandisa kunogona kukanganisa hutano hwavo, vashoma kwazvo vanofunga kuita chimwe chinhu kumisa kufambira mberi kwavo mukufutisa.
Vazhinji vanorema zvakanyanya uye vanonyanya kuneta havana ruzivo uye chirango chinodiwa kuita shanduko yemuviri kana calorie-inodzora kudya. Kune avo vanotanga shanduko yemuviri, vasingasviki 5% vanokwanisa kuzadzikisa kwavo uremu.
Ichokwadi ndechekuti kurasikirwa nemafuta emuviri akawandisa kana iwe wakanyanya kufuta kana kufutisa idambudziko iro vashoma vanoita kunge vanokunda. Kuchinja maitiro ehupenyu, kushandura chikafu, uye kutanga chirongwa chekurovedza muviri kunoda huwandu hwakakosha hwekuzvipira panzvimbo yemunhu akafuta.
Pasina kutungamira uye kukurudzira, munhu anonamira anorasikirwa nechinangwa nekushandurwa kwemuviri wavo, zvobva zvaita kuti vadzokere mukuzvikuvadza.
Kufambira mberi kwesainzi yesainzi pamusoro pemakumi maviri-apfuura makore kwakaburitsa kumwe kunakidza uye kunakidza kwekupinduka mune zvemishonga mhinduro kugadzirisa nekurapa kuneta. Iyo "inoera grail" ye pharma tsvagurudzo ndeye kugadzira budiriro yekurasikirwa piritsi iyo inobvumidza vanhu vakafutisa kudzosera miviri yavo kune BMI ine hutano.
Iwe unogona kuzviwana iwe pachako unofungidzira kune chero wezvehutano kana chiremba anokuudza iwe kuti kune inoshanda yehuremu piritsi rekurema.
Orlistat, neimwe nzira inozivikanwa nemazita ayo eAlli neXenical, ine mukana wekuve chishamiso chekuderedza uremu mushonga unopa vanhu vakafuta mukana wekudzosera muviri wavo kuhutano.
Vanhu vakawandisa vanogona kutenga Orlistat pamusoro pekambani mu60mg (Alli). Iyo 120mg (Xenical) vhezheni, inoda chiremba chiremba kuti utenge uye ushandise. Kune akawanda generic vhezheni anowanikwa online zvakare.
Orlistat imishonga inofanirwa kubatsiridza chirongwa chemunhu chekudya uye chirongwa chekurovedza muviri. Naizvozvo, hatigone kuchidana kuti chishamiso kuonda piritsi, nekuti zvichiri kuda kuti mushandisi aise simba mukudya kwavo uye kurovedza muviri.
Nekudaro, mishumo yemushandisi inoratidza kuti Orlistat mushonga unoshanda kwazvo wekumhanyisa kurasikirwa nekurema paunomisikidzwa pamwe neakakodzera zvinovaka muviri uye mirayiridzo yekurovedza muviri kune zvinodikanwa zvemunhu akafuta
Vakuru vane makore anopfuura gumi nemasere ekuzvarwa vanogona kutenga 18mg Orlistat mapiritsi pamusoro pekamberi, chero vaine muviri Mass Mass Index (BMI) ye60 kana kupfuura. Vakawanda vakanyanya vanese vane BMI vanopfuura makumi matatu vanogona kushanyira chiremba wavo kuti vawanikwe mapiritsi e25mg Orlistat ekushandisa pamwe chete uremu Kudya.
Vanachiremba vanogona zvakare kubvumidza kushandiswa kweiyo 120mg vhezheni muvanhu vane BMIs yakaderera kusvika makumi maviri neshanu, kana vari kunetsawo nezvimwe zvinetso zveutano, zvakaita seshuga kana kukwira kweropa. Vaya vanhu vanoshandisa Orlistat vachitarisirwa nachiremba wezvekurapa vanogona kunyorera kuti yavo inishuwarenzi ivharise mitengo yemushonga.
Nekudaro, havazi vese vanishuwarenzi vanogona kuvhara kurapwa. Kuwana weOrlistat mutengesi online zviri nyore, uye Orlistat mutengo mirayiridzo yevatengesi vepamhepo vanosiyana, zvichienderana nembiri nemhando.
Saka, Orlistat inoshanda sei?
Orlistat inovhara iyo GI turakiti kubva mukumedza mafuta mune chikafu chaunodya. Nekudaro, mafuta asina kuvhiringidzwa mukudya kwako anopfuura nepamuviri wako, apa muviri unozvigunun'una nechinhu chisina kunaka.
Carbohydrate nemapuroteni ane 4-calories esimba mune imwe gramu. Nekudaro, giramu remafuta rine 9-calories. Naizvozvo, iyo pfungwa iri shure kwe kushandiswa kweOrlistat ndeyekudzivirira vanhu vakakora kubva pakubata iyi calorie-dense munyu.
Vanhu vakafutisa vanowanzodya chikafu chine mafuta mazhinji, uye sarudzo dzechikafu hadzina hutano. Nekudzora kudya kwecaloric uye nekuchinja kudya kweakakora kusvika pane zvine hutano sarudzo, munhu akawandisa anotanga kuona mhedzisiro yevhiki-pa-vhiki mhedzisiro mukushanduka kwemuviri wavo.
Nekudaro, vanhu vakafuta zvakanyanya vanogona kutora kusvika pamatatu kusvika mashanu-makore ekuzvipira kwakazvipira kuchinja mune zvekudya, kurovedza muviri, uye mararamiro zvinhu, vasati vadzokera kuhutano hweBMI.
Kugara wakasimba mukuremerwa nekuremerwa kwehuremu kushandurwa kwehukuru uhwu kwakaomera chero munhu. Naizvozvo, vanhu vakafuta zvakanyanya vanogona kuwedzera chirongwa chavo chekudya uye kurovedza muviri nekushandiswa kweOrlistat kukurumidza kuita mhinduro.
2. Orlistat Inotenderwa Kuchengeteka Kuti Ishandiswe neFDA?
Sezvakaita chero chinodhaka, Orlistat yakafamba nekuongororwa uye kuyedzwa neFDA. Orlistat FDA kubvumirwa yakafamba mukati me1999 pasi peCAS Nhamba 96829-58-2.
Iyo FDA yakaedza yakapihwa mavhezheni emushonga mumakiriniki ekuedzwa mukati megore ra1999, ichibvumidza iyo Xenical vhezheni yemushonga yakakodzera kushandiswa pamwe nekutungamirwa kweanodzidziswa wezvekurapa. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti Xenical inongowanikwa chete pasi pemishonga.
Iyo FDA yakabvumidza Alli (60mg Orlistat) seyakachengeteka kuti ishandiswe muvanhu vanorema kupfuura zera regumi nemasere-makore. Nekudaro, iyo 18mg vhezheni iripo yekutenga pamusoro pecheti. Kunyange iyo OTC vhezheni iri yekungoshandiswa pamwe chete neye calorie-inodzora, yakaderera-mafuta zvekudya, hapana humbowo hwepamutemo hwehungamiro hunodiwa kana vanhu vakanyanya Tenga Orlistat pamusoro payo counter.
Iyo FDA inoteedzera ese mishumo yekunetseka maitiro mune vashandisi veAlli uye Xenical, iwo mavara erudzi rweOrlistat. Iyo masangano yakagamuchira zviuru zvezivikiso kubva kune vashandisi maererano nemhedzisiro uye zvakaipa zviitiko zvehutano zvinoitika panguva yekushandiswa kwemushonga.
Nemishumo iyi yehutano hwakawandisa, inogona kutya vamwe vangangoishandisa kusabatanidza muhurongwa hwekurasikirwa uremu. Nekudaro, chokwadi ndechekuti zviitiko zvakashata zvehutano zvakataurwa kuFDA neruzhinji, ndezvekuita chete naAlli uye Xenical, uye kwete zvakananga Orlistat.
Parizvino, hapana humbowo hwekiriniki hunoratidza kuti Orlistat ndiyo inokonzeresa zviitiko zvakashata zvehutano zvakasangana neAlli nevashandisi veXenical. Zviri zvachose zvinogoneka kuti matambudziko aya anogona kubva kune chimwe chinongedzo chinoshandiswa mukugadzirwa kwemushonga.
Iyo FDA inoramba ichiongorora mhedzisiro uye matambudziko nehuputi hwakakomberedza kushandiswa kweAli neXenical. Nekudaro, haisati ichizoburitsa chero chirevo pamusoro pekurega kuchengetedza uye kutenderwa kwemishonga.
Iyo FDA inewo kunetseka pamusoro pekuti inogamuchira mishumo pane 1 chete pane gumi ese zviitiko zvakaipa. Sangano iri rakaitawo miedzo pamusoro pechiropa chekudzivirira kweAlli muvashandisi muna 2007.
Miedzo yacho yaisanganisira kuongororwa kweiyo pre-kiriniki, kiriniki, post-kushambadzira, uye kushandisa zvinodhaka dhata inosanganiswa neakasimba chiropa toxicity uye kukuvara nekuda kwekushandiswa kweiyo Xenical yakaratidza mishonga (3)
Mhedzisiro yeongororo iyi inogumisa kuti Xenical haina hukama nekugadzira yakasimba chiropa toxicity kana kukuvara.
Nekudaro, iyo FDA yakaratidza zviitiko gumi nembiri mumashure-musika ongororo ine chekuita nekukuvara kune chiropa chakakonzerwa neXenical, uye imwe nekushandiswa kwaAli. Kuwedzera kuongororwa kwehufakazi kunoratidza kuti zvimwe zvinopa zvinhu, sekushomeka, uye kushomeka-kana kushandisa mishonga zvinoshandiswa, zvinogona kukonzera kukonzeresa kwakasimba kwechiropa mune zviitiko izvi. (12)
3. Orlistat seremu Kuneta Kurasikirwa Zvinodhaka
Inotevera nguva iwe paunenge uchifamba pasi yekuwedzera iyo aisle kune yako yemuno GNC, tarisa pane yekurasikirwa kwemafuta chikamu. Iwe unowana akawanda ezviremera zvekurasikirwa zvigadzirwa musimba uye mapiritsi fomati. Iyo kuora kurasikirwa kuwedzera bhizinesi indasitiri yemabhirioni-emadhora, uye kune akawanda mabrand anoedza kutonga ino nzvimbo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Orlistat iri yekurema kurasikirwa nemushonga, kwete yekuremerwa yekudzikira yekuwedzera. Kana iwe ukatora zvakawandisa uremu zvinowedzera, iwe unogona kusangana neakati nyoro thermogenic mhedzisiro, senge inorwadza dumbu kana kuwedzera kushoma mukusimudzira uye tembiricha.
Nekudaro, kusashandiswa zvakanaka kana kushungurudzwa kwemishonga kuora kurasikirwa nemishonga, senge Orlistat, inogona kukonzera zvakaipa zvakanyanya zvakaipa izvo zvinogona kukanganisa kugara kwako kwenguva yakareba.
Orlistat inoshanda nemazvo, uye vamwe vashandisi vanogona kusarudza kuwedzera yavo protocol kusimudzira mhedzisiro yavo. Nekudaro, zano iri nderechokwadi rekumisikidza mushandisi mune rimwe dambudziko rakakomba nehutano hwavo. Ingoshandisa Orlistat pamwe chete nekutarisirwa kwechiremba, kunyanya kana uri kushandisa iyo 120mg fomati.
A: Nzira yekudzora uremu nekutora Orlistat?
Paunenge uchigadzira kushandiswa kweOrlistat yekudzikisira uremu, mushandisi anofanira kutevedzera kuraira kwachiremba wechiremba, kunyanya kana uchishandisa iyo 120mg fomati yemushonga. Asati iye wega atanga chirongwa chavo chekuremerwa uremu, ivo vanofanirwa kuve neiyo chaiyo mindset kuita rakabudirira kushandurwa kwemuviri.
Iyeye anorema zvakanyanya kana kuti anofutisa anofanirwa kunzwisisa kuti mushonga haisi mhinduro kumatambudziko avo. Mhinduro chete yekukosha kwekuremerwa kwenguva refu ndeyokushandurwa kwechikafu, maitiro emararamiro, uye kuiswa kwechirongwa chemuviri chakasimba.
Pasina iyi pfungwa, munhu akafutisa kana kufutisa anozopedzisira aedza kutsamira pakunyanyisa kwemushonga kana vasingaone mhedzisiro yavanoda kubva mukuedza kwavo. Kunyanya kushandisa iyi yekuremerwa uremu mushonga kunogona kusanganisira kukura kweakanyanya mhedzisiro-mhedzisiro inogona kukuvadza hutano hwemushandisi.
Paunenge uchishandisa Orlistat mune chero fomati, ita shuwa kuti unotevedzera iwo mirayiridzo yemirayiridzo yakanyorwa pamudziyo, kana nachiremba wemishonga ari kuendesa iwo mushonga. Orlistat dosage inogona kusiyana zvichienderana neBMI yemunhu. Nekudaro, usatore mushonga kwenguva yakareba kupfuura zvakatemwa, kana kunyorwa pane inoiswa chigadzirwa chivharo.
Vanhu vakafutisa uye vakafutisa vanogona kushandisa Orlistat padhuze neyakajairika, yakaderera-mafuta, koriori-inorambidza kudya. Pakuronga chirongwa chemunhu chikafu, vanovaka nezvezvikafu vanofanira kuona kuti mafuta haatarise zvinopfuura makumi matatu muzana emakoriori mune chero chikafu.
Ivo vakafutisa vanofanirwa kutevera dhayeti yavo uye chirongwa chekurovedza muviri, uye dhizaini Orlistat zvinoenderana nemazita echiremba wavo. Mazhinji madosing protocols anoburitsa matatu madhizaini emushonga mukati mezuva rese akaparadzaniswa zvakaenzana.
Kana mushandisi akasvetuka chikafu, saka ivo vanofanirwa kusvetuka Orlistat danho rinodikanwa pakudya ikoko zvakare.
Kana ukasvetuka pakudya kana kuti ukadya chikafu chisina mafuta, svinura Orlistat yako yedhiramu iyoyo. Mushandisi anofanirawo kutanga kutarisisa kune hutano mahebhu pazvikafu. Verenga kuburikidza neinobatanidzwa uye zvine zvinovaka zvinovaka muviri, uye dzivirira kudya kwakawanda-mafuta.
Orlistat inogona zvakare kukanganisa kupinza kwayo yakakodzera mvura-inonyungudutswa mavitamini mukudya kwako. Naizvozvo, varwere vanofanirwa kukumbira chiremba wavo kuti vakurudzire rudzi rwevhitamini rwavanogona kutora pavanenge vachishandisa iwo mushonga.
Vashandisi vanofanirwa zvakare kutarisa yavo dosage uye kushandiswa kwemushonga. Orlistat mushonga une mukana wekushandisa zvisirizvo-script. Naizvozvo, vamwe vanhu vanogona kunyura mumushonga wako kana ukasaterera kune kwako kushandisa.
Tora chero chinowedzera kana imwe mishonga pashoma kana maawa maviri-usati wajaira yako Orlistat. Iyi dosing yekuita inodzivirira chero maitiro akashata nemamwe madhiragi aungave uchishandisa. Kana iwe uri pane chero imwe nzira yekurapa, ita shuwa udza chiremba wako usati washandisa Orlistat.
B: Chii Chandinofanira Kudzivirira Kana Ndichishandisa Orlistat?
Kana uchibvunzana nachiremba nezve hutano hwako uye chirongwa chako chekurova kufutisa, ita shuwa kuti unokurukura nyaya dzako dzese dzese nezveutano hwako nachiremba. Chiremba anofanirwa kuziva nezve ese mishonga iwe yauri kutora izvozvi vasati varaira Orlistat.
Mimwe mishonga inogona kukonzera kukakavara nemamwe madhiragi, zvichikonzera mhedzisiro yakaipa mumushandisi. Iwe unofanirwa kuzivisa chiremba wako nezve kushandisa kwako kweimwe yemishonga inotevera.
Oral chirwere cheshuga mishonga kana insulin kushandiswa
Mishonga inotapudza eropa yakadai se warfarin (Coumadin)
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ichi hachisi chakazara rondedzero yemishonga iyo inogona kukonzeresa matambudziko neOrlistat kushandiswa.
Ita musangano pamwe nachiremba wako kuti tikurukure zvese zvekunyorera mishonga, mishonga yekuwedzera, uye zvimwe zvigadzirwa zveOTC zvaunoshandisa izvo zvinogona kukonzeresa kubatana kana uchishandisa Orlistat.
Pasina mamiriro ezvinhu iwe unofanirwa tora Orlistat pasina kubvunza nyanzvi yezveutano kutanga. Nepo iyo 60mg vhezheni iripo nyore nyore kuti ishandiswe neOTC, mushandisi achiri kufanira kuonana nachiremba wezveutano asati amuwedzera kune yavo yekudya uye chirongwa chekurovedzera.
Kana ikatorwa pamwero mukuru kana kwenguva yakareba, Orlistat inogona kukonzera matambudziko akanyanya ehutano. Ivo vanhu vanofunga kuti vangangove vakawedzera pamusoro peOrlistat vanofanira kufonera muchetura rubatsiro hotline nekukurumidza uye kufonera ambulensi.
Varwere vanofanira kudzivisa kutora Orlistat kana vaine chero zvinopesana nezvinwiwa mune zvokurapa. Usatore Orlistat kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge warapwa.
Isingaperi malabsorption syndrome
Chirwere cheshuga I kana II
Kudya kusagadzikana senge anorexia kana bulimia
Kana parizvino uchishandisa chero mimwe mishonga yekurasikirwa uremu kana zvigadzirwa zveOTC
4. Ndeapi Mhedzisiro Unogona Kutarisira Kubva Kushandisa Orlistat?
Zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti hapana chinhu chakadai se "chishamiso kuonda kurasikirwa nemishonga." Nepo kushandiswa kweOrlistat padyo nekoriori-inorambidza kudya uye chirongwa chekurovedza muviri kuchikurudzira kurasikirwa nekurema mune vakafutisa kana vanhu vakawandisa, ivo vanofanirwa kumisikidza tarisiro chaiyo nemaitiro acho.
Orlistat mhedzisiro dzinosiyana kubva pamunhu kuenda kumunhu, uye pamwe nekuti munhu wese ane akasiyana metabolism uye rudzi rwemuviri. Nekudaro, iwe unogona kutarisira kuti mwero wekurasikirwa kwemafuta uve pakati nepakati, uye kushandisa mushonga uyu kunogona kubatsira kuti uwedzere mapaundi mashoma pasvondo pane nekudya nemaitiro ekurovedza muviri wega.
Nekudaro, kutarisira kutarisira kukurumidza kwemafuta kurasikirwa hazvibatike. Mikana iripo ndeyekuti zvakatora murwere makore akati, pamwe kunyange makumi emakore, kuti vasvike mamiriro avo epfuma ekusafutisa. Naizvozvo, kutarisira kuti mafuta anyunguduke husiku humwe, kana kunyangwe mumwedzi mishoma, kuchasiya mushandisi achinzwa kusuwa uye kuodzwa mwoyo nemhedzisiro yavo.
Vanachiremba vanotsanangudza kurasikirwa kwehuremu sekudzikisira huremu hwemunhu, hwe5% kana kupfuura pamusoro pegore. Zvidzidzo zvinoratidza kuti zvinopfuura makumi mana kubva muzana zve Orlistat vashandisi zadzisa ichi chinangwa, chero ivo vanotevera kuraira kwechiremba nachiremba uye nezvehutano.
Chidzidzo ichi chinoratidzawo kuti vanhu avo vaidya calorie-inorambidzwa kudya, pamwe nekuwana kugara uchirovedza muviri, uye kushandiswa kweOrlistat, vakarasikirwa neavhareji ye5.7-lbs zvakanyanya kupfuura boka rekutonga vaive vasiri kushandisa Orlistat. (5,6)
(1) Ndezvipi Zvakanakira kushandisa Orlistat?
Iko kune kukosha kukuru kwekushandisa Orlistat sechimwe chikamu chakanyatso kurongeka uye kutariswa uremu kurasikirwa chirongwa. Mushonga uyu unoshanda mukudzivirira muviri kubva mukutora mafuta, nekudaro zvichideredza zvikuru chikamu chakakosha chemakoriyori akadyiswa nemurwere.
Nekudaro, nepo Orlistat iri yekuwedzera inowedzera kune yekuderedza uremu chikafu, uye ichiburitsa yakakosha mhedzisiro, isu hatigone kusimbisa kuti vanhu havafanirwe kushandisa ichi chinodhakwa sedonje. Ivo vanhu vanovimba nemushonga kana kuwedzererwa sedombo rekona rehuremu hwavo hwekurasikirwa vanozoona kushomeka kwemhedzisiro.
Vamwe vanhu havaite shanduko mukudya kwavo kana mazinga ekurovedza muviri uye, pachinzvimbo, vanovimba neOrlistat kuti vaite basa racho. Nekudaro, vanhu ava vanozozviona vavodzwa nemitoro yavo yekuremerwa uremu.
Orlistat inobatsira chirongwa chekudzikira uremu chine chimiro chakatsanangurwa uye zvinangwa zvakajeka. Hazvigoneki kuti murwere achave neruzivo kana kurudziro yekupedzisa yavo shanduko yemuviri chete.
Naizvozvo, kuroja mupi wezvehutano uye mudzidzisi, uye kutevedza chirongwa chakatemwa chekudya uye chekurovedza muviri chinofanirwa kune chero munhu anoita chirongwa chekuderedza uremu.
Vazhinji vanhu vakafutisa uye vakafutisa vanoona kuti vanowana kurasikirwa kwakakosha mumavhiki maviri ekutanga ekutanga kudya zvine hutano uye kurovedza muviri - uye izvi vasati vaunza chero zvinowedzera kana zvinodhaka seOrlistat.
Nekudaro, vamwe vanhu vanogona kunetseka kurasikirwa nehuremu hwese kunyangwe vachitevera chirongwa chakaringana chekudya uye chirongwa chekurovedza muviri. Vamwe vanogona kuona kuti kufambira mberi kwavo mapepa vanokurumidza kushandisa nzira dzechisikigo. Vanhu ava vanogona kuona kuti Orlistat inovabatsira mune aya mamiriro ezvinhu, achivabvumira kuona kudzikama kwekuremerwa mumuviri mukati mekushandurwa kwemuviri wavo.
(2) Ndedzipi Idzi Ngozi Dzokushandisa Orlistat?
Vanhu vanofunga kushandisa Orlistat vanofanira kutora nguva kuti vaongorore rondedzero yeOrlistat mhedzisiro inosanganisirwa nekushandiswa kweiyo kurasikirwa uremu mushonga. Orlistat mushonga une simba wakagadzirirwa kuti ushandiswe pamwe chete necalorie-inorambidza kudya kunorongedzerwa munhu akafuta neanogona kudya chikafu.
Iyo OTC vhezheni yemushonga inogona kuve nyore kuwanikwa yekutenga pasina mishonga, asi hapana munhu anofanirwa kushandisa Orlistat pasina kutaura nachiremba wavo zvisati zvaitika.
Muzvirwere zvekiriniki zvinosanganisira kutungamira kweXenical kune varwere, 27% yakagadzika oiri munzvimbo dzemukati mekupfeka, 24% yevashandisi vane ruzivo rwegasi ichiteverwa nekusazvidzora fecal discharge, 22% yevashandisi yakaona kutanga kwefecal emergency, 11% yakaratidza kuwedzera kwavo. nhamba yekufamba kwematumbo, uye 8% ine fecal incontinence.
Kune vakawanda vashandisi, manyoka zvakare yakajairika mhedzisiro yekushandisa mushonga, kunyanya kana ichatanga kushandiswa kwemushonga wehuremu.
Allergic reaction in the mushonga haawanzo, uye mimwe yemazuva ese mhedzisiro madhara vanonzwa zvinoitika mumavhiki ekutanga ekushandisa Orlistat inosanganisira zvinotevera.
Mafuta marara kana mabara mune yako underwear
Oiri kana yeOrange-ruvara rwewuru muoo
Gasi rinofambidzana neinoraswa mafuta
Yakaregedza chitsoka, kuwedzera kwekumanikidza, uye kutadza kwemushandisi kudzora mafambiro avo
Kuwedzera kwehuwandu hwekufamba kwematumbo
Kuzeya mbichana, kurutsa, kurwadziwa mumimba, kuora, uye kurwadziwa rectal
Kuneta uye kushaya simba, zvigaro zvine ruvara rwevhu, urini yakasviba, kurasikirwa kwekuda kudya, kutsemuka, kana kuoneka kwe jaundice (yellowing yevachena vemaziso kana ganda)
Zvimwe zvishoma-zvakajairika nyaya varwere vanosangana nazvo pavanotora Orlistat inosanganisira zvinotevera.
Nyaya dzakapumha nemeno
Iko kuvandudzwa kwezviratidzo-zvinoita zviratidzo
Iko kuvandudzwa kwezviratidzo-zvakaita zviratidzo
Musoro uye kurwadziwa kumashure
Nyoro kusvika pakuwedzeredza ganda rashes
Vashandisi vanofanirwa kuziva kuti iyi haisi rondedzero yakazara yematambudziko anogona kuitika kana uchishandisa Orlistat. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waitika pamhedzisiro, kana chiitiko chakasangana nemishonga
5. Vashandisi Vanotii nezve Orlistat?
Kutarisa kutenderedza kwewebhu kuongororwa nevashandisi, kunotungamira kune zvakasiyana mhedzisiro, dzese uye dzinopesana nekushandiswa kwemushonga. Orlistat wongororo kubva kuvanhu vakawana zvakajeka mhedzisiro kune avo vakasangana nekuipisisa kwemigumisiro.
Nekudaro, zvinoita sekunge kazhinji mhaka dzinosanganisira vanhu vaive vakafutisa, kana vane BMIs vanopfuura makumi maviri neshanu, vane ruzivo rwakakwana nemushonga. Ongororo dzose dzakanaka dzatakawana yemushonga wekurasikirwa uremu dzaive dzichibva kune vashandisi vane ruzivo izvo zvaive zvichishandurwa nemuviri paruoko rwemachiremba nyanzvi.
Naizvozvo, vanhu ava vakaronga nzira yavo yekuremerwa uremu nenzira kwayo. Ivo vese vairoja mupi wezveutano, vakagara vachibvunzwa chiremba vavo, uye vakaomerera pasidhi protocol yakarairwa nachiremba wavo wezveutano.
Heino muenzaniso weiyo chaiyo-nyika Orlistat mhinduro dzatakawana online.
"Zita rangu ndinonzi Ron, uye ndaive ndakafuta kusvika padanho rekuparadza hupenyu hwangu. Nekufamba kwaienda nepahwindo, uye hutano hwangu hwakadzikira, ndakaenda kuna chiremba wangu kuti andibatsire. Iyo doc yakandiisa mukubata nachiremba wezvekudya, uye ini ndakazonzwisisa zvandinoda zvekhalori zvezuva racho.
Mushure memwedzi mitanhatu yekudya zvakanaka uye kumhanya zuva rega rega, ndakaona mhedzisiro, asi kufambira mberi kwangu kwakatanga kumira. Chiremba wangu akati ndimboedza Xenical (Orlistat). Handina kufunga zvakawanda nezvazvo, asi kuonda kwangu kwakaramba kuchienderera mushure mezuva repiri ndichishandisa mushonga.
Gore rakatevera, uye ndinonzwa semunhu mutsva. Ndiri pakati pehuremu hwangu hwechinangwa, uye mapaundi anoramba achiuya. "
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti havazi vese vanozowana uyu mhedzisiro, asi ichi chiratidzo chakanaka chemibairo iwe yaunogona kutarisira kana zvese zvikafamba mushe.
Mumuenzaniso uyu, mhedzisiro yaRon yaive mhedzisiro, asi hazvireve kuti mumwe munhu haangazviteedzere mhedzisiro yakafanana, chero vaine hutarisiro hwakakodzera hwezvokurapa.
6. Key Thataways yekushandisa Orlistat seremu Kurema Kuremara kwezvinodhaka
Kufutisa kwakakura kune utano kune hutano hwevanhu vekuAmerica mudunhu rese. Huwandu hwekufutisa huri kuwedzera mune vese vakuru, vechidiki, uye vana, neveSouthern and Eastern States yeUS akaomeswa nedambudziko riri kuwedzera.
Kufutisa kunotungamira kukudziridzwa kwenyaya dzehutano dzisingaperi, dzakadai seshuga, kukwira kweropa, uye chirwere chemoyo. Mamiriro ezvinhu zvakare anokonzeresa kufa kwegumi nemasere muzana evaAmerican vese vane makore makumi mana kusvika makumi masere nemasere emakore.
MaAmerican mazhinji anotendeukira kuzvinodhaka uye zvinowedzera kuti zvivabatsire kukurumidza kudzora mapurogiramu avo ekurasikirwa Zvisinei, vazhinji vevanhu ava havaiti zvakakwana kuti vachinje mararamiro avo, kudya, uye kurovedza muviri vasati vashandisa dzimwe nzira dzokurasikirwa.
MaAmerican vanofanirwa kunzwisisa kuti hapana ipfupi nzira yekurasikirwa nemafuta emuviri. Kuwana ruzivo rweyakakodzera kudya uye maitiro ekurovedza muviri kwakakosha kutora kumashure kudzora kwehuremu hwemuviri wako. Usati washandisa kushandiswa kwemishonga inorema yekurasikirwa, zvakanaka kuti uve nechokwadi chekuti unodya zvakanaka uye kutanga waekisesaiza.
Ingofunga chete nezvekushandisa Orlistat mushure mekubvunzana nachiremba nezve nezve nezvekuremera uremu zvinangwa. Chiremba wako anozokutumira iwe kune anofanirwa nehutano hwehutano hwechirongwa chekudya chinosangana nezvinodiwa zvako zve caloric kurasikirwa kwemafuta.
Ivo vanhu vari kuyedza chirongwa chekurasikirwa uremu vanofanirwa kuve nechokwadi kuti vanovaka timu yakavapoterera kana vakuda kuona mhedzisiro. Chiremba wako, chiremba wehutano hwehutano, physiotherapist, uye yako pachako mudzidzisi anoumba timu yako yekukupa mukana wakanyanya kukunda wekukunda chero zvipingamupinyi munzira yako kuzadzisa zvinangwa zvako zvekurasikirwa.
Orlistat yakafanana nekuwedzera jet mafuta kune yakashongedzwa-yakagadzirirwa kushanda injini. Kana varwere vaine kudya kwavo uye maitiro ekurovedza muviri ari pasi pehutongi, kuwedzera chinoderedza uremu chinodhaka seOrlistat chinogona kukurudzira zvakanyanya mibairo.
Vasati vafunga kutora Orlistat, varwere vanofanirwa kuonana nachiremba wehutano kuti vaone kana vachinge vasangana nezvakakodzera pakurapwa.
Paunenge uchiongorora mhedzisiro yezviitiko zvevashandisi neOrlistat, iri rakasanganiswa bhegi remhedzisiro. Nekudaro, zvinoita sekunge vanhu avo vanotora Orlistat pakurairwa nachiremba uye kuhaya timu yekutsigira chaiyo vanowana mhedzisiro yavanoshuvira.
Padivi rerutivi, kune vanhu vazhinji vane zviitiko zvinotyisa nekushandisa Orlistat. Ndechikonzero cheichi chikonzero chakakosha kwazvo kuti vanhu vatore Orlistat iri pasi pekutarisirwa nachiremba.
Orlistat inopa vanhu vakafuta uye vakaremerwa neFDA-inotenderwa pamusoro peiyo counter sarudzo yekuvandudza avo ekuremera uremu kuedza.
Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive kuti vese varwere vanoshandisa mushonga, zvinoda dzidzo maererano nekuenderera kwehunhu maitiro panguva yekushandisa kwavo mushonga, futi.
Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Low-dosi orlistat migumisiro pahuremu hwemuviri zvinyoro kune vanhu vane mwero vanorema: vhiki gumi nemaviri, mapofu-maviri, placebo-inodzorwa chiyedzo. Ann Pharmacother. 16; 2006 (40): 10-1717
Smith SR, Stenlof KS, Greenway FL, et al. Orlistat 60 mg inoderedza visceral adipose tishu: vhiki makumi maviri neshanu zvisina kurongwa, placebo-inodzorwa, multicenter muyedzo. Kufutisa (sirivhuru Spring). 24; 2011 (19): 9-1796.
Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu hwekuwedzeredza Zvese zvaunofanirwa Kuziva Nezve Pregabalin